Kungani Inkinobho Yakho Yesisu Iphuma Lapho Ukhulelwe? - Imfanelo Yezempilo
Kungani Inkinobho Yakho Yesisu Iphuma Lapho Ukhulelwe?
Cishe uke wezwa ngayo noma mhlawumbe wake wayibona nasenyameni: Inkinobho yesisu sowesifazane ingaqhamuka njenge-timer turkey lapho ekhulelwe.
Impela, kungenye yalemiphumela emibi yokukhulelwa kodwa yeqiniso, kepha kungani kwenzeka kwasekuqaleni?
Ngokusho kukaNancy Herta, M.D., ob-gyn eMichigan State University, empeleni kuyinhlanganisela yengcindezi evela esibelethweni sowesifazane okhulelwe nokwelula isikhumba. Kunokululwa okuningi okungazelelwe kuleyo ndawo, uyachaza. Uma uthola isisindo, uyakwenza kancane kancane, kepha isibeletho siyisitho esiqondayo ngempela esidudula khona lapho ngesikhathi sokukhulelwa.
Okumangazayo, akwenzeki kuwo wonke umuntu. Ngenkathi uJason James, MD, umqondisi wezokwelapha eMiami I-FemCare Ob-Gyn , ithi kwenzeka kwabesifazane abaningi — imvamisa cishe ekuqaleni kwenyanga yesithathu — kuncike kakhulu kumuntu, ngisho nasekukhulelweni. Abanye besifazane abayenzi i-outie noma kunjalo, futhi bamane nje bathambe inkinobho yesisu lapho ivele inyamalale khona nje, usho kanjalo.
Ngeshwa, ayikho ngempela indlela yokubikezela ukuthi ngabe kuzokwenzeka kuwe. UHerta uveza ukuthi akuhlobene nokuthi uthola isisindo esingakanani noma ukuthi ingane yakho inkulu kangakanani, yize kuvame kakhulu ngemuva kokuthi usuvele unengane ngoba isikhumba sakho asithetheleli futhi sinwebeka.
Ngenhlanhla, ngokuvamile kuyinto yesikhashana. Iningi labesifazane lizobuyela nenkinobho yesisu ekukhulelweni okujwayelekile ngemuva kokukhulelwa, kepha-ke konke lokho ukwelula kwesinye isikhathi kungathinta ukwakheka nosayizi wenkinobho yesisu uma konke sekukhulunyiwe kwenziwa, kusho uJames.
izithombe ezinqunu zemikhonto ka-britney
Into eyodwa nje eyodwa ongayibheka phambili….
Ungaphuthelwa: UNick Jonas no-Emily Ratajkowski Baphendula Imibuzo Ecasulayo Ngabo Ngokwabo:
i-shampoo enhle kakhulu onsomi yezinwele ze-platinum
uthingo lwe-pastel french tip izipikili
imibala kadayi ebukeka kahle ngezinwele ezinsundu